Iindaba - Ngaba imaski yakho yobuso inxitywe ngokuchanekileyo?
Isigqumathelo se-anti haze sisidingo semihla ngemihla kubomi bemihla ngemihla, esinokuthintela uthuli, inkungu, ukungunda komzimba kunye neminye imisebenzi, kunye nokuthintela uthuli ekungeneni kwimiphunga yomzimba ngomngxunya womlomo kunye nomngxunya wempumlo nokonakalisa umzimba. Ngoku makhe sibone ukuba yeyiphi indlela elungileyo yokunxiba imaski yenkungu.
Okokuqala, ukhetho lweemaski zokulwa inkungu luyacetyiswa ngohlobo, kuba olu hlobo lweemveliso lunxibelelana ngqo nolusu lomzimba wethu, ngakumbi umgca wokuqala wokukhusela amajoni omzimba womntu (umlomo womlomo, indawo yokuphefumla), kunye izinto ezisetyenziswa ziimveliso ezingaphantsi zikwangaphantsi, ke iimaski ezingaphantsi ziya konakalisa ulusu lwethu lobuso. Ngaphambi kokunxiba, kufuneka sihlambe izandla zethu, kwaye xa sibumba ikliphu yempumlo, kufuneka sisebenzise zozibini izandla ukuyibeka; Ukongeza, ukuba sifuna ukunxiba ngakumbi, kufuneka sijonge ukuqina komoya.
Xa ukhupha imaski yehaze kunye nebhegi yokuhluza, kuyacetyiswa ukuba ungasebenzisi isikere kangangoko kunokwenzeka, kuba kulula ukusika ngqo isihluzi engxoweni ngesikere, eya kuthi ibangele inkunkuma kunye nelahleko eninzi. Susa ngobunono isihluzi esongiweyo, ungasebenzisi amandla amaninzi. Emva kokudibanisa, inokubekwa kwindawo yomoya kangangexesha elithile ukukhupha iigesi eziyingozi eziveliswe kwinkqubo yokulungisa, kodwa ungayihlambi ngamanzi ukuze ucoceke. Ungaze uyihlambe ngamanzi. Faka isihluzo kwicala elingaphakathi lesigqumathelo ngokwemilo yemveliso. (ecaleni kobuso). Beka ibhulorho yempumlo Velcro kwindawo ehambelana neVelcro yemaski. Ngokubanzi, esi sikhundla sisondele empumlweni yobuso, kunye nocingo olucekeceke njengokulungiswa. Ngokobungakanani bobuso bakho, lungisa ibhendi yelastikhi kumacala omabini esigqubuthelo ukuze kungabikho sikhewu xa uyinxibileyo, kwaye ucofe ucingo ngokuqinileyo de ucingo luxineke ngokupheleleyo kwimo yempumlo, ukuze akukho msantsa ubonakalayo phakathi kwemaski nempumlo.